Shiinaha Palletizing robot HY1165A-290 Soo-saare iyo Soo-saare | Yunhua
HY1165A-290 waa aaladda loo yaqaan '6 axis robot' oo inta badan loo adeegsado falanqaynta. waa aalad mashiin ah oo loo adeegsado fulinta tooska ah ee shaqada, taas oo si otomaatig ah walxaha ugu ridi karta haamaha santuuqa hoostooda iyadoo la adeegsanayo barnaamij horay loo sii diyaariyey, waxay ku xirnaan kartaa lakabyo kala duwan, ka dibna riixaysaa si loo fududeeyo daabulida fargeetooyinka bakhaarada si loogu keydiyo . Ujeeddadeedu waa in la caawiyo ama la beddelo sallinta aadanaha.
Isticmaalayaashu waxay ugu shaqeyn karaan nidaam fudud oo ay ku xardhaan badeecadaha, markay sidaas sameeyaan, ma aha oo kaliya inay ka caawiso dadka isticmaala inay keydsadaan goobta bakhaarka iyo ilaha aadanaha, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa wax ku oolnimada baalasha oo ay ka dhigtaa in badeecaduhu ay nidaamsan yihiin.
Dhidibka MAWL Soo noqoshada jagada Awood
Jawiga hawlgalka Miisaan culus Ku rakibida Darajada IP
6 165 KG Mm 2mm 10KVA 0-45 ℃ 1800KG dhulka IP54 / IP65 (dhexda)
Baaxadda dhaqdhaqaaqa J1 J2 J3 J4 J5 J6
± 170 ° + 78 ° ~ -38 ° 0 ° ~ 60 ° ± 220 ° ± 125 ° ° 360 °
Xawaaraha ugu badan 70 ° / s 82 ° / s 82 ° / s 134 ° / s 77 ° / s 120 ° / s
Q1.Sidee ayaa loo isbarbar dhigayaa qiimaha mootada balaastigga loo yaqaan 'robotic palletizer' iyo kuwa kale ee lagu beddelan karo?
AA robotic palletizer-ka ayaa ka qaalisan hal shey oo nidaamka palletizing adag laakiin waa ka qaalisan yahay palletizer balaaran oo heersare ah oo leh dhaawacyo badan. Xayeysiinta Robotic waxay u dhaxeysaa $ 10K qaabkeeda ugu fudud illaa $ 30K + jirka robotka.
Q2. Noocee ah Qalabka-Dhamaadka-Qalabka-Gacmeedka (EOAT) ayaa loo isticmaalaa in lagu xirto?
A.Waxaa jira tiro ikhtiyaarro ah oo loo yaqaan 'EOAT' oo mid walba laga heli karo adeegsiga gaarka ah. Koobabka faakiyuumka ama suufka ayaa guud ahaan loo isticmaalaa kiisaska sare ee xiran iyo baaldiga. Qalabka qaadista ama qalabka isku-dhafka iyo isku-dhafka ayaa guud ahaan loo adeegsadaa kiisaska sare ee furan ama saxaarad. Qalabka bacda leh faraha kor u qaadida & shaambada guud ahaan waxaa loo isticmaalaa bacaha waaweyn ee 20-100 #. Qaybaha qaabdhismeedka qaabdhismeedka ah ayaa guud ahaan lagu soo qaataa aalad isku haysa.
Q3. Waa maxay aalado lagu rido?
A. Adigoo ku shaqeynaya dukaankaaga aalado laalaab, waxaad kordhin kartaa joogtaynta howlahaaga rarka iyo dejinta.
Q4.Maxaad u malaynaysaa YOO QALBIGA markaad la hadlayso Japan iyo robot summad Yurub ah?
A.waxaan wali wadnaa waddo aad u dheer, waa inaan aragnaa tan. Ujeedkeenuna waa macaamil yar iyo mid dhexdhexaad ah oo aan awoodin lacag badan oo loogu talagalay magacyadan caanka ah, sida ABB, Funac, Kuka, Yaskawa, OTC.
Q5.Waxaan ku tababbari karaa nidaamkaaga xakamaynta robotka?
A.Waddankee ayaad joogtaa? waxaad u imaan kartaa warshaddeena tababar qoto dheer oo bilaash ah. Ama waxaad weydiisan kartaa ganacsatadeena ku sugan dalkaaga caawimaad.
Hore: robot ku dhufashada HY1003A-098
Xiga: Mashiinka 'Palletizing robot' HY1010A-143